एक किलोमिटर यात्रा गर्दा १५ पैसा मात्रै खर्च हुने स्कुटर नेपाली बजारमा, कति पर्छ मूल्य ? - ramechhapkhabar.com
एक किलोमिटर यात्रा गर्दा १५ पैसा मात्रै खर्च हुने स्कुटर नेपाली बजारमा, कति पर्छ मूल्य ?
पेट्रोलको मूल्य बृदिका कारण आहतमा परेका स्कुटर प्रयोगकर्ताको लागि वरदान साबित हुने खालको इलेक्ट्रिकल स्कुटर बजारमा आएको छ। प्योर ईभीले बजारमा ल्याएको इट्रान्स नियो र प्लुटो स्कुटर नेपाली बजारमा व्हाइट लोटसले बिक्री गरिरहेको छ।
त्यसो त हाल सो कम्पनीले बजारमा ल्याएको इ-प्लेटो र नियो इन्ट्रान्सको ब्याट्रीमा ३ वर्षको वारेन्टी नै छ। उनका अनुसार सामान्यतया यी ब्यत्रिले ६/७ वर्ष काम गर्छन्। त्यसपछि मात्रै फेर्नु पर्ने हुन्छ। जुन बेला यस्ता ब्याट्रीको मूल्य हालको तुलनामा निकै नै सस्तो भइसकेको हुनेछ।
साउदीमा अलपत्र १५ नेपाली भन्छन् : ‘म्यानपावरले हामीलाई कैदीजस्तै बनायो’
१० जेठ, काठमाडौं । आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परी साउदी अरब पुगेका १५ जना नेपाली...
मलेसियामा आफ्नै कोठामा मृत फेला परेका लिम्बुको शव नेपाल ल्याउन आर्थिक सहयोग संकलन सुरु